အညာမြေ: ကူညီပေးသောအဖွဲ.စည်းများနှင်. အညာ
လေဆိပ်မှာပြသနာတပ်တော. အ၇င် ဆုံး ဖုန်းဆက်မိတာ က ကိုမောင် ၇ုံးေ၇ာက်တော. ဖုန်းဆက်တယ်.
ဦးမောင်ေ၇ ကျွန်တော်လေဆိပ်မှာထွက်မ၇လို. Center ကိုအကူညီတောင်းချင်လို. မပိုး ၇ဲ.ဖုန်းနံပါတ်လေး၇ှာပေးပါဦးအကူညီတောင်း ခဲ.ပါတယ် ဦးမောင်လဲမသိ လို.မမြင်.ဆီကနေတဆင်.မေးပါ ဆိုပီဖုန်းနံပါတ်ပေးပါတယ် ဒါနဲ.ပဲမမြင်.ကိုမပိုး၇ဲ.ဖုန်နံပါတ် ၇ှာပေးဖို.ပြောတော.မမြင်.ကူညီမူနဲ.မပိုး၇ဲ.ဖုန်းနံပါတ် သိ၇ခဲ.ပါတယ် ဖုန်းဆက်တော. ဖုန်းကခေါ်မ၇
ဘာလုပ်၇မယ်မသိတော. အ၇င်အတူလုပ်ခဲ.တဲ.ဦးလေး ကိုအကူညီတောင်းပီး Center ကို သွားခိုင်.ခဲ.ပါတယ်
center ကလဲအဲလိုပြသနာတူတာတွေအ၇င်ကဖြစ်ဖူးကြောင်းဘယ်လိုမလုပ်မ၇ပဲပြန်ပို.ခံ၇ကြောင်း ၇ှင်းပြ
လိုက်တော.အားလျှော.ပီ မသန်.ဆီဖုန်းဆက် အကူညီတောင်းပါ တယ်
အစ်မေ၇ ကျွန်တော် လေဆိပ်မှာထွက်မ၇လို. ဘယ်လိုလုပ်၇မလဲလမ်းညွန်ပေးပါဦး.. စောစောကမင်.သူ
ငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖုန်းဆက်ပီးပြောထားတယ် အစ်မတို.ဘယ်လိုမလုပ်မ၇တဲ.ပြနာမျိုးပါ သဌေးလုပ်ပေးမ၇မှာ ဆို လို.လက်လျော.လိုက်၇ပြန်တယ်. ဒါနဲ.သဌေးဆီဖုန်ဆက်ပြောတော.
တနလာင်္နေ.မလုပ်လို.၇မှာ ဒီနေ.၇ုံးပိတ်လို. နောက်.နေ.မလုပ်ပေးမယ်ပြောပီးဖုန်းချသွားခဲ.ပါတယ်
ဒါနဲ.ပဲ ဖုန်းနဲ.ဆက်မေးနဲ.သူငယ်ချင်းတွေလဲစိတ်ပူပီးဖုန်းဆက်မေးကြ အကူညီပေးကြ နဲ.
မအေးမွန်စိုး ဆီဖုန်းဆက်မေးဖို.အကြံပေးတာနဲ.ဖုန်းဆက်တော. သူသိသမျှ၇ှင်းပြပီ ကူညီနှိုင်မဲ.လူကိုမေးကြည်.ပေးမယ် .စိတ်ဓာတ်မကျဖို.အားပေးပီ ကိုထင်အောင်ကျော် ဆီဆက်သွယ်ပေးပါတယ် အဲဒီအစ်ကိုက ညနေလောက်ကျဖုန်းခေါ်ပါတယ် အကြိုးကြောင်းမေးပီ သဌေးကိုလုပ်ပေးဖို.ပြော၇င် ၇မှာဘာမအားမငယ်နဲ.ဖြစ်နှိုင်မဲ.နည်.လမ်းတွေပြောပြပါတယ်
. အဆင်ပြေမှာပါ.အားပေးပါတယ် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ကဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်ပီအကူညီတောင်းပါပြောတယ် သူက ကိုတင်အောင်ထွန်း MWTV ကပါ
သူတို.တတွေ၇ဲ.အကြံပေးမူနဲ. တနလာင်္နေ.မနက်ေ၇ာက်တော. လေဆိပ်ကထွက်လာပါတယ်
အကုန်အဆင်ပြေပါတယ် စာချုပ်တော. မ ပြသနာထက်တက်ပါတယ် ၇က်ကျော်ပီးစာ၇ွက်ယူမသွား
ပဲပြန်တာ သူတို.လဲလုပ်ပေးချင်ပေမဲ. နည်းလမ်းမ၇ှိကြောင်း ပြောပီးအိမ်ပြန်၇မယ်ပြောပါတယ်
ကိုတင်အောင်ထွန်းက အန်ဆန်းcenter ကို သွားခိုင်းပါတယ် အဲဒီမှာသေချာပြောပြပါတယ်
ဆိုးလ်လာခဲ.ဖို.ခေါ်ပါတယ်.. ဟိုေ၇ာက်တော.လဲ ၇ုံးပေါင်းစုံ ဖုန်းဆက်ပီး ပြသနာကိုပြောပြပါတယ်
နေ.လောက်ေ၇ာက်တော. 성동구 center ကိုသွားခိုင်ပါတယ်.အဲဒီကိုဖုန်းဆက်ပီးပြောပြပေးထားပါတယ်
ဟိုေ၇ာက်တော.စက်၇ုံကိုဖုန်းဆက်ပေးပီးပြန်လို.၇ပီ စက်၇ုံကိုပြောလိုက်ပီ တဲ...ဘာပြောပေးလဲမသိလို.
ပေးတယ် .အလုပ်သမား၇ုံးေ၇ာ immigrationေ၇ာသွား၇တယ် သဌေးသာလုပ်မပေးဘူးဆို အိမ်ပြန်၇င်ပြန်
မပြန်၇င် အို ၇မှာသေချာပါတယ် ကိုအောင်တင်ထွန်း ကိုဖုန်းခေါ်ခဲ.တာအားလုံးပေါင်း၃၅ခါ လေး၇က်အတွင်း ခေါ်တဲ.အချိန်လက်ခံပီးကူညီပေးခဲ.တာပါ ဘာသာပြန်ပေးခဲ.တာလဲ ၁၀ကြိမ်ထက်မနည်းပါ..
သူငယ်ချင်းများ အကူညီ လို၇င် ဖုန်းနံပါတ်များသိသလောက် ဝေမျှလိုက်ပါသည် အညာမြေ
ကိုအောင်တင်ထွန်း 010 54722826
ဂု၇ို Center 16440644 ပီးမ၁၃ နိပ်
seoul 성동구 Center 02228279745
Posted by anythar at 01:12
Labels: korea 근로자
Gmail Invisible Gtalk Offline
အညာမြေ သို. အလည်တခေါက် နှင်. သတိပြုစ၇ာ